काठमाडाैँ,साउन २४ । नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रवक्ता पद पार्टीको कारिन्दाको पद नभएको बताएका छन् । एपीवान एचडीको कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयसँगको अन्तर्वातामा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । आफूलाई कसैले बाध्य पारेर नभइ र स्वेच्छाले प्रवक्ता पद पद त्याग गरेको पनि उनले स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
‘पार्टीबाट राजीनामा दिएको होइन, यो प्रवक्ताको पद ठूलो पद पनि होइन । ७ गतेको हो घटना सचिवालय बैठकमा प्रवक्ताले कस्तो भूमिका खेल्ने कस्तो पार्टीले के लाइन लिने भन्नेमा छलफल भएको थियो’, उनले भने, ‘त्यही बैठकमा मैले राजीनामा दिएको हो । तर १० गते एउटा पत्रिकामार्फत् यो कुरा आएको हो ।
ठिक लाइ ठिक गलतलाइ गलत भन्नी प्रवृती हाे मेराे । तर मैले अाफ्नाे तर्फबाट स्वइच्छाले राजीनामा दिएकाे हाे काजीले भने ।
बैठकमा डा. गोविन्द केसीको अनसन र आन्दोलनबारेमा पनि पार्टीमा छलफल भएको उनले बताए । ‘७ गते अगाडि नै पार्टीले उनको जीवन रक्षा गर्ने, पहिलो र दोस्रो वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो’, उनले भने, ‘७ गतेको बैठकमा वार्ता कसरी गर्ने, कुन मुद्दामा गर्ने ? छलफल भएको हो । बैठकमा केसीको आन्दोलनलाई कसरी लिने ? भन्ने पनि कुरा भयो ।’
पद् छोड्ने निर्णयदेखि यौन जीवनसम्मः नारायणकाजीका कुरा
पद् छोड्ने निर्णयदेखि यौन जीवनसम्मः नारायणकाजीका कुरातमसोमा ज्योतिर्गमय#AP1HDLive
AP News HDさんの投稿 2018年8月6日月曜日